(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 27/09/2020)
Ngaba wakha ayefuna ukundwendwela eYurophu into iwayini yesivuno sonyaka othile, njenge uloliwe? ntoni umsindo ukuba zihamba njani 300 ngehora? IYurophu a womnatha enkulu koololiwe-high speed ukuba kuya kamsinya oya kuyo. iinkonzo uloliwe obaleka ngesantya esiphezulu ayeke kuphela izixeko ezikhulu. Oololiwe zinika iinqwelo obutofotofo 1 kunye neklasi-2, kanye olungileyo iinkonzo zokutya. Nantsi eyona malunga okhawulezayo oololiwe eYurophu.
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ngoku nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fwhich-are-the-fastest-trains-in-europe-and-the-world%2F%3Flang%3Dxh- (Skrolela ezantsi ukubona Code lungisela)
#ikhawulezisa #kwizinga eliphezulu tips uloliwe train Travel